जन्मबार अनुसार थाहा पाउनुहोस् को कति धनी ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकजन्मबार अनुसार थाहा पाउनुहोस् को कति धनी ?
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार जन्मबार अनुसार मानिसको स्वभाव तथा जीवनको अवस्थाको बारेमा समेत जाकारी पाउन सकिन्छ। जन्मबारका अनुसार मानिसको ग्रहको प्रभाव शरीरमा पर्छ।
मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दा’वी छ। बार अनुसार पुरुष र स्त्रीको स्वभाव र भाग्यमा समेत फरक पर्छ । एउटे बारमा जन्मिएका पुरुष र स्त्री फरक फरक स्वभाव र भाग्यका हुने गर्छन्। आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो ।
मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् ।
आइतबारःआइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् ।यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ । आइतबार जन्मिने स्त्री दा’न९पुण्य गर्ने र ब’लशाली एवं च’तुर हुन्छन् ।
सोमबारःपुरुष सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छ ।सोमबार जन्मिने ब्यकेति विद्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वा’स प्र’श्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ । स्त्री सोमबार जन्म भएका महिला सुन्दर हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् ।
मंगलबारःपुरुष मंगलबार जन्म हुने ब्यक्ति सामान्यतया धनी हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिको स्वभाव उ’ग्र हुन्छ । यसै कारण उनीहरुसँग मानिसहरु वे’खुसी हुन्छन् ।यिनीहरुलाई छाला सम्बन्धी रो’ग हुन सक्छ । दुख र सुख आउने जाने भैरहन्छ । स्त्री ज्योतिषका अनुसार मंगलवार जन्म भएका स्त्री क’ठोर हृ’दयका हुन्छन् यस्ता स्त्रीमा द’या माया कम हुन्छ । यस्ता स्त्री दु’ब्ला पातला र झ’गडालु समेत हुन्छन् ।
बुधबारःपुरुष बुधबार जन्मिने ब्यक्ति धर्मकर्ममा मन भएका हुन्छन् । यिनीहरुको बोलीमा मिठास हुन्छन् । यिनीहरुको ८ र २२ वर्षको उमेरमा कष्ट पाउने योग हुन्छ ।स्त्री बुधाबार जन्मिने स्त्री कुनै विशेष क्षेत्रमा रुचि राख्ने र विशेषज्ञता हासिल गर्ने हुन्छतन् । सरस्वतीको विशेष कृपा हुने हुँदा यिनीहरु सुन्दर र शुसील पनि हुन्छन् ।
विहीबारःपुरुष विहीबार जन्मिने पुरुष वि’द्वान र प’राक्रमी हुन्छन् । यिनीहरुले जीवनमा धेरै उतार च’ढाव र स’मस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि साहसी हुन्छन् । यिनीहरुसँग संगत हुनेहरु खुसी हुन्छन् ।विहीबार जन्मिनेहरुलाई ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षमा संकट पर्छ । स्त्री जुन स्त्रीको विहीबार जन्म हुन्छ त्यस्ता महिला उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सर्वगुणी हुन्छन् ।
शुक्रबारःपुरुष शुक्रबार जन्मिने ब्यक्ति हँसिलो स्वभावका हुन्छन् । बु’द्दीमान र मृ’दुभाषी यिनीहरुको स्वभाव हो । यिनीहरु स’हनशिल पनि हुन्छन् । यिनीहरु शौ’खिन हुन्छन् र २० र २४ वर्षको उमेरमा क’ष्ट हुन्छ।स्त्री कुनै पनि स्त्री शुक्रबार जन्मेकी छे भने उसको श्वभाव चं’चल हुन्छ । यस्ता स्त्री मस्ती म’जाक गर्छन् । परिवार र समाजमा विशेष इज्जत हुन्छ । केही काला रंगका भएपनि सुन्दर हुन्छन् ।
शनिबारःपुरुष जुन ब्यक्तिको जन्म शनिबार हुन्छ उनीहरु कृषि ब्यावार वा प्रविधीको क्षेत्रमा रुची राख्छन्। यिनीहरुका लागि बाल्यकाल क’ष्टपूर्ण हुन सक्छ। भाइ बहिनी वा दाइ दिदीबठ्ठ स’न्तुष्टी मिल्दैन। यिनीहरुलाई २० र २५ वा ४५ वर्षमा क’ष्ट हुन्छ। स्त्री शनिबार जन्मिने स्त्री दु’बली पातली हुन्छन् तर अ’ग्ला। सामान्यतया यस्ता स्त्री कालो वर्णका हुन्छन। यस्ता महिला अरुका कुरा का’ट्ने पनि हुन् सक्छन्।
बेहुलाले दुईकाे दुना नजान्दा बिहे नै र’द्द भयाे